Waxyaabaha ugu fiican ee lagu dhisi karo shabakadaada WordPress | Abuurista khadka tooska ah
Ricard Lazaro | | Naqshadeynta Webka, Khayraadka
Maanta dad badan iyo shirkado badan ayaa doorta inay dejistaan ​​boggooda iyagoo adeegsanaya wordpress. WordPress waa CMC (Nidaamka Maareynta Mawduuca) oo kuu oggolaanaya inaad si fudud u abuuri karto, adoo adeegsanaya arrimo, bogag internet ama baloogyo.
Marka xigta waxaan sameyn doonaa a liiska waxyaabaha loogu talagalay WordPress inaad tixgeliso taasna waxay kuu fududeyneysaa noloshaada markaad u sameyneyso websaydhkaaga, balooggaaga ama dukaan internetka ah macaamiishaada.
2 Plugin Luqadaha Badan leh ee WordPress (WPML)
3 Form Contact 7
4 Geesiga CSS
5 Laaluush Muuqaal
UpdraftPlus waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu dhameystiran ee aan ka heli karno qaybta keydka. Iyada oo aynaan samayn karin oo keliya nuqul nuqul xilliyeed, laakiin sidoo kale waxaan sameyn karnaa nuqulo keyd ah markaan u baahano (tusaale ahaan xilligan ka hor inta aan la cusbooneysiin wordpress), dib u soo celi nuqulada keydka ah si aad uga tagto boggeena barta "dhibicdii hore" haddii ay dhacdo inaan dhibaato ku qabno ama aanan jeclayn waddada aan qaadnay iyo, marka lagu daro, inaan kaydinno nuqulkeenna amniga keydad badan.
Qalabkan waxaan ku kaydin karnaa keydadka aan ku sameyno Dropbox, Google Drive, serverka FTP ama adeegyada sida Amazon S3 ama Rackspace Cloud Files. Waxaan sidoo kale sameyn karnaa "xulasho" keyd ah oo aan dooran karnaa waxa aan dooneyno inaan ilaalino (keydka, shabakada oo dhan, plugins ...).
Plugin Luqadaha Badan leh ee WordPress (WPML)
WordPress Plugin Luuqado Badan Waa fiilo lacag bixin ah (boggeeda internetka waxaad ka heli kartaa qiimaheeda). Waa qalab aad loogu talinayo haddii aad rabto dhiso degel ku hadla luuqado badan. Kaliya maahan inay kuu ogolaato inaad turjunto boggaga, qoraalada ... laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad tarjunto qaybaha, menus ... aad ayey u fududahay adeegsiga.
Foomka xiriirka 7 waa plugin kaas oo waxaad abuuri kartaa oo aad maamuli kartaa in ka badan hal foom oo xiriir ah, Marka lagu daro awood u lahaanshaha qaabeynta iyo waxyaabaha ku jira e-mayllada qaab aad u fudud iyadoo la adeegsanayo calaamadeyn fudud. Foomku wuxuu taageeraa soo gudbinta Ajax, CAPTCHA, Akismet spam filter, iyo waxyaabo kaloo badan.
Halyeey Css waa shey kale oo lacag la bixiyo laakiin noloshaada wax badan ayeey ka dhigeysaa hadii aadan haysan fikrad badan oo CSS ah. Iyada oo ay waad habeyn kartaa template-ka, adigoo ka shaqeynaya qaabka FontEnd, iyada oo aan loo baahnayn aqoon sare oo css ah sidaan faallo ka bixiyay. Iyada waxaad ku yeelan doontaa guddi, aad u fudud in la isticmaalo, kaas oo aad ku go'aamin karto qiimaha astaamaha astaamaha la soo xulay. Shabakada waxaad ku leedahay tusaale sida ay u shaqeyso. Laakiin iska jir! Waa inaad ogaataa haddii ay ku shaqeyneyso shaxanka aad u dooratay websaydhkaaga, maaddaama qalabkani aanu la shaqeynin dhammaan moodeellada jira ee ku jira wordpress.
Laaluush Muuqaal Waa qalab kale oo si heer sare ah loogu taliyay haddii aadan aqoon u lahayn koodhka. Qalabkaan waa tifaftire muuqaal ah Taas oo aad si muuqaal ah ugu shaqeyn karto "BackEnd" iyo "FrontEnd" labadaba. Iyada oo ay tahay, waxaad awoodi doontaa inaad ka shaqeyso qaabdhismeedka iyo waxa ku jira ee bog kasta ama gelitaanka boggaaga internetka yeelan doonaan.
Haddii aad rabto inaad sameysato dukaan internetka ah, Woocomercise waa qalabka ugu badan ee lagu taliyo in la sameeyo. Iyada oo aad ku rakiban karto oo aad ku habeyn karto dukaan internetka ah si fudud oo dareen leh. Maxaa ka dhigay aaladdan hoggaamiyaha 'ecommerce »plugins-ka ayaa ah inay bixiso waxqabadyo ka badan kuwa kale ee ku jira qaybtan iyo inay leedahay dukumiintiyo aad u fiican iyo taageero, gaar ahaan casharrada fiidiyowga ee sharraxaya sida loo rakibo iyo sida loo qaabeeyo talaabo talaabo ah si aad u sameysid dukaankaaga internetka.
Sida magaceedu muujinayo, warsidaha waa plugin loogu talagalay wargeysyada emaylka. Waxay ku habboon tahay abuurista xog-ururin iyo abuurista, daba-galka iyo dirista emayllada. Way fududahay in la isticmaalo oo loo qaabeyn karo qaab caqli gal ah isla markaana loo habeyn karo emaylka jawaabta ee ku qorista, ka-saarista, iwm ...
Haddii websaydhkaagu yeelan doono qaybta blog, Sumome Waa shey ay ka mid yihiin hawlo badan oo xiiso leh, laakiin waan taaganahay marka ay timaado wadaagista shabakadaha bulshada. Qalabkan, waxaad ku dari kartaa badhanka warbaahinta bulshada meel kasta oo barta ah. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku xirto 18 shabakadaha bulshada oo aad u habeysid qaabka iyo midabada badhanka. Intaas waxaa sii dheer, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku darto xisaabiyeyaal si aad u ogaatid inta jeer ee gelitaan ee aad daabacday la wadaagay iyo shabakadaha bulshada ee ay ku wadaageen.
Waxay kaloo leedahay shaqo kale oo aad u xiiso badan, waana taas kuu ogolaanaya inaad ku darto badhamada share on top of images. Shaqadani waa mid aad u xiiso badan haddii aad qorsheyneyso inaad sameysatid baloog kaas oo sawirradu ay yeelan doonaan kaalin xoog leh, taas oo ah, baloog muuqaalkiisu aad u sarreeyo. Intaas waxaa sii dheer, oo ay weheliso sawirka la wadaago, xiriiriye barta boostada ayaa sidoo kale la wadaagayaa
Hawsha kale ee ay ka mid tahay, iyo in yar oo plugins ay leedahay, waa tan SumoMe highlighter, taas waxay u oggolaaneysaa soo-booqdaha inuu la wadaago qoraalka ay doorteen gelitaanka. Taasi waa, haddii shaqadan la awoodo oo booqde uu xusho weedh ama sadarka boostada ee tilmaamaha, badhanka ayaa u muuqda inuu la wadaagayo weedhaas ama sadarkaas shabakadaha bulshada oo ay la socdaan xiriiriye baloogga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waxyaabaha ugu fiican ee lagu dhiso boggaaga WordPress
Gawaarida mustaqbalka ee Khyzyl Saleem